६५% सम्म सस्तियो सिजनेबल तरकारीको भाउ, काँक्रा १५ रुपैयाँ किलो, घिरौला ३५ रुपैयाँमै ! | आर्थिक अभियान
६५% सम्म सस्तियो सिजनेबल तरकारीको भाउ, काँक्रा १५ रुपैयाँ किलो, घिरौला ३५ रुपैयाँमै !
२०७९ बैशाख, १६
बैशाख १६, काठामाडौ । स्वदेशमै उत्पादन भएका तरकारी बजारमा आउन थालेपछि तरकारीको मूल्य ६५ प्रतिशत सम्म घटेको पाइएको छ ।
कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्याङक अनुसार एक महीना अघि घिरौलाको मूल्य प्रतिकिलो १०० रुपैयाँ नाघेकोमा अहिले ३५ रुपैयाँमा झरेको छ । खुद्रा बजारमा भने घिरौलाको मूल्य प्रतिकिलो ५० देखि ६० रुपैयाँ रहेको छ ।
त्यसैगरी, हाईब्रिड काक्रो एकमहीना अघि प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ रहेकोमा अहिले घटेर प्रतिकिलो १५ रुपैयाँमा आएको छ ।काक्रोको खुद्रा विक्री मूल्य भने प्रतिकिलो ३० देखि ४० रुपैयाँसम्म रहेको छ ।
यस्तै तिते करेलाको मूल्य भने अहिले बजारमा प्रतिकेजी ६० रुपैयाँदेखि ७० रुपैयाँमा विक्री भइरहेको छ । एक महीना अघि तिते करेलाको मूल्य थोकमै ११० देखि १२० रुपैयाँ सम्म रहेको थियो ।
यस्तै बजारमा यी तरकारीहरुको मूल्य मात्र घटेको छैन । पछिल्लो एक महीनामा कालिमाटी बजारमा गोलभेडा, परवल, लौका, भिण्डी, आदीको मूल्य पनि घटेको छ । तर अकबरे खुर्सानी, कागती, धनिया, गुन्द्रक हरियो लसुन, प्याज जस्ता तरकारीको मूल्य भने केही बढेको छ ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार बजारमा नेपालमा उत्पादित तरकारी आउन शुरु भएसँगै तरकारीको मूल्य घट्न थालेको हो । अहिले अधिकांस तरकारीको मूल्य ५० प्रतिशत हाराहारी घटिसकेको छ ।
बजारमा वर्खे तरकारी भित्रिए सँगै हरियो तरकारीको मूल्यमा कमी आएको कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार बिकास समितिका प्रवत्ता विनय श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
हिउँदे तरकारिको सिजन सकिएकाले काउली, बन्दा लगायतका तरकारीको मूल्य बढेको र वर्खे तरकारीहरु आउन थालेकोले सिमि,बोडी,लौका,घिरौला,आलु लगायतको मूल्यमा कमि आएको उनले बताए ।
उनका अनुसार चालु आर्थीक वर्षको ९ महिनमा २ लाख तिन हजार ७०९ मेट्रिक टन तरकारी कालिमाटी बजार भित्रिएको छ ।
जसमध्ये ४२ प्रतिशत भारत, चिन र बंगलादेशबाट आयात गरिएको र बाकीँ ५८ प्रतिशत आन्तरीक उत्पादन रहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
आन्तरीक उत्पादन मध्ये धादिङ्, मकवानपुर,काभ्रे,चितवन रसर्लाहिबाट धेरै तरकारी भित्रिने उनले बताए ।
अघिल्लो वर्षको सोहि अवधिमा १ लाख ७१ हजार मेट्रिक टन तरकारी कालिमाटी बजार भित्रिएको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष आयात तथा आन्तरिक उत्पादन दुबै बढेको श्रेष्ठले बताए ।
भारतले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि विश्वबजारमा गहुँको मूल्य आकाशियो, २ महीना यताकै उच्च [२०७९ जेठ, २]
कालीमाटी तरकारी बजारका स्टलको सम्झौता सकिंदै, नयाँ सम्झौता गर्दा किसानले पनि पाउने [२०७९ बैशाख, २७]
किसानले २७५० मै गहुँ बेचीसकेपछि सरकारले तोक्यो ३१६५ रुपैयाँ समर्थन मूल्य ! [२०७९ बैशाख, २०]
६५% सम्म सस्तियो सिजनेबल तरकारीको भाउ, काँक्रा १५ रुपैयाँ किलो, घिरौला ३५ रुपैयाँमै ! [२०७९ बैशाख, १६]
आजदेखि काठमाडौं उपत्यकामा पुन: मेलम्चीको पानी वितरण शुरु, खानेपानी मन्त्रीले गरे उद्घाटन [२०७९ बैशाख, ११]
अनावश्यक अभाव सृजना गरेर खाद्य वस्तुको मूल्य वृद्धि गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने विभागको चेतावनी [२०७९ बैशाख, ८]